इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न हतार... :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
मनोज सत्याल काठमाडौं, भदौ १५
भदौ ५ गते यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सुरू गर्‍यो। उच्च प्रविधिमा आधारित र सवारी ट्रयाकिङ समेत गर्न सक्ने नम्बर प्लेटको जडान सुरुवातमा सकारात्मक चर्चाको विषय बन्यो।
तर नम्बर प्लेटका डिजाइन सार्वजनिक भएपछि भने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको आलोचना शुरु भयो। नम्बर प्लेटमा हामीले प्रयोग गर्न छोडेको प्रशासनिक इकाई-अञ्चल प्रयोग गरियो।
सार्वजनिक भएको पहिलो इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा बाग्मती अन्चल लेखिएको थियो, त्यो पनि अंग्रेजीमा!
प्रश्न उठ्यो - संघीयतामा गएपछि किन अञ्चल? अनि नेपाली अक्षर खोइ?
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान शुरु गरिएको समय झनै अनुपयुक्त देखियो। प्रदेशको निर्वाचन भएपछि प्रादेशिक पहिचान सहित सवारी साधनको नम्बर वितरण हुनेछन्। यस्तोमा प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनु केही महिना पहिले किन इम्बोस्ड नम्बर प्लेट शुरू गरियो? अहिले परिवर्तन गरिएको नंम्बर प्लेट फेरि पैसा खर्च गरेर केही महिना पछि किन परिवर्तन गर्ने? सवारी साधन धनीलाई दोहोरो झन्झट किन?
व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने कम्पनीसँगको टेण्डरमा रहेको सम्झौता अनुसार जरीवाना तिर्नबाट बच्न इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सुरुवात गरिएको हो।
'हामीले सुरुवात गर्न ढिला भइसकेको थियो, भदौबाट बल्ल सुरु भयो,' भट्टराईले भने, 'अझै ढिला गरेको भए हामीले जरीवाना तिर्नुपर्थ्यो।'
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक समेत रहेका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले अहिले नम्बर प्लेट परिवर्तन गरेको ब्यक्तिलाई पछि निःशुल्क परिवर्तन गरिदिने व्यवस्था मिलाउने सेतोपाटीलाई बताए।
‘पहिलो चरणको कार्यान्वयन पछि मात्र कसरी अगाडि बढ्ने तय गर्नेछौं,’ उनले भने।
बाग्मती अञ्चल उल्लेख गरिएको कुराको पनि उनले बचाउ गरे। ‘प्रदेश नभए पनि अहिले जिल्लाले नागरिकता दिएको छ, त्यस्तै हो,' पाण्डेले भने।
तर नागरिकता जस्तो सवारी साधनको नम्बर जग्गा पास गर्न, बैंक खाता खोल्न वा अन्य कुनै कामका लागि बाध्यकारी छैन। प्रदेश गठन हुन ढिलो हुने भएपछि अहिलेनै अञ्चलको नाम लेखेर हतारमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बितरण शुरु गर्नुपर्ने जरुरी थिएन।
पछि प्रदेश सरकारले आफ्नो नाम राख्न सक्ने गरि सफ्टवेयर डिजाइन गरिएको उनले दावी गरे।
'नम्बर प्लेटमा प्रदेशको पहिचान राख्ने स्पेस छ, पछि राख्न सकिन्छ', उनले भने, 'अहिले अञ्चल कार्यालय भएकै कारण हामीले बाग्मती उल्लेख गरेका हौ।'
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनकै लागि अंग्रेजी राख्ने निर्णय गरिएको बताए। 'यसअघिको टेण्डर गर्दा नै अन्तराष्ट्रियस्तर र अंग्रेजीको निर्णय भएको रहेछ,' भट्टराईले भने, 'पासपोर्ट पनि त अंग्रेजीमा हुन्छ।'
नेपालमा अहिलेसम्म नेपाली भाषामै नम्बर प्लेट राख्ने प्रचलन छ। सवारी दुर्घटना गराएर कुनै सवारी फरार भएको अवस्थामा अंग्रेजी नबुझ्ने सर्वसाधारण भने यस्तोमा मर्कामा पर्नेछन्। भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भने पनि जापान, चीनलगायतका मुलुकमा उक्त देशकै भाषाका नम्बर प्लेट प्रयोग हुन्छन्।
सवारी साधानमा अंग्रेजीमा नंम्बर प्लेट राखिनुको मुख्य कारण अर्कै छ। नेपाली भाषाको देवनागरिक लिपी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट डिजाइन गर्ने सफ्टवेयरमा नभएका कारण अंग्रेजीमा नंम्बर प्लेट राखिएको हो।
'अब नेपाली राख्ने हो भने सफ्टवेयर परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने।
इम्बोस्ड नंम्बर प्लेट राख्ने विषयमा नेपालले दुई वर्ष अघि टेण्डर गरेको थियो। टेण्डर हात पारेको थियो अमेरिकी ज्वाइन्ट भेञ्चर रहेको बंगलादेशी कम्पनी डेकाटोर-टाइगरले। डेकाटोर टाइगरसँगको सम्झौता अनुसार नेपालले वैशाखबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नुपर्थ्यो। डेकाटोर-टाइगर र नेपालबीच पाँच वर्षमा सबै नंम्बर प्लेट इम्बोस्ड गरिसक्ने सम्झौता छ। उक्त कम्पनीले झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने ठेक्का पाएको हो।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भए पनि यसको उपयोग भने तत्काल हुनेछैन। सवारी कर तिरे नतिरेको जाँच, सवारी साधनको ट्र्याकिङ गर्न, रेडियो फ्रिक्वेन्सी जाँचका लागि आवश्यक गेट निर्माणको अझै सुरुवात भएको छैन। राजधानी छिर्ने पाँच नाकामा गेट निर्माण गर्ने योजना विभागले बनाए पनि जग्गा समेत छनोट गर्न सकेको छैन।
प्रदेशको नामाकरण पछि पुन: परिवर्तनको झन्झटबाट बच्ने हो भने सवारी धनीले अहिलेनै इम्बोस्ट नम्बर प्लेट नफेरेकै जाति। प्रदेश सरकार नबनुन्जेल सर्वसाधारणले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने निर्णय सरकारले गर्ने कुनै गुञ्जायस छैन।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ १६, २०७४, ०१:२०:४१